နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှ လက်ရှိအခြေအနေ….. – Cele Snap
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ… ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ဟာဆိုရင် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာတတ်ကြွစွာပါဝင်ရင်း ပူဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံထားရစဉ်အချိန်မှာလည်း ကျန်းမာရေးအလွန်ဆိုးရွားနေပြီး လမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်ပဲ တွဲခေဓသွားရတဲ့ အခြေအနေထိပါပဲနော်…။
ကျန်းမာရေးဆိုးရွားနေတဲ့ပိုင်တံခွန်ဟာ အခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်း စစ်ဆေုးံတွင်ဆေးကုပေးနေတယ်လို့လည်း သတင်းတစ်ချို့တက်လာခဲ့ပေမယ့် အမှန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ မင်းသားချောပိုင်တံခွန်ရဲ့လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပုံတစ်ပုံဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်. ။
၎င်းပုံမှာဆိုရင်လည်း ပိုင်တံခွန်ဟာ အတော်လေးကိုပိန်ချုံးနေပြီး ကျန်းမာရေးဆိုး၇ွားနေတဲ့ အနေအထားပါ. ။ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဟာဆိုင်လည်း ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရင်း များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ပိုင်တံခွန်အတွက်ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ပရိတျသတျကွီးရေ… ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ မငျးသားခြော ပိုငျတံခှနျဟာဆိုရငျ လူထုလှုပျရှားမှုမှာတတျကွှစှာပါဝငျရငျး ပူဒျမ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံလိုကျရတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဖမျးဆီးခံထားရစဉျအခြိနျမှာလညျး ကနျြးမာရေးအလှနျဆိုးရှားနပွေီး လမျးတောငျမလြှောကျနိုငျပဲ တှဲခဓေသှားရတဲ့ အခွအေနထေိပါပဲနျော…။
ကနျြးမာရေးဆိုးရှားနတေဲ့ပိုငျတံခှနျဟာ အခုလကျရှိအခြိနျမှာလညျး စဈဆေုးံတှငျဆေးကုပေးနတေယျလို့လညျး သတငျးတဈခြို့တကျလာခဲ့ပမေယျ့ အမှနျမဟုတျခဲ့ပါဘူး ပရိတျသတျကွီးရေ။ မငျးသားခြောပိုငျတံခှနျရဲ့လကျရှိမွငျတှနေ့ရေတဲ့အခွအေနတေဈခုဖွဈတဲ့ ပုံတဈပုံဟာ လူမှုကှနျယကျမှာ ပွနျ့နှံ့လာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ. ။
၎င်းငျးပုံမှာဆိုရငျလညျး ပိုငျတံခှနျဟာ အတျောလေးကိုပိနျခြုံးနပွေီး ကနျြးမာရေးဆိုးရှားနတေဲ့ အနအေထားပါ. ။ပိုငျတံခှနျရဲ့ ပရိတျသတျတှဟောဆိုငျလညျး ဒီပုံလေးကိုကွညျ့ရငျး မြားစှာစိတျမကောငျးဖွဈမတောပဲဖွဈပါတယျနျော..။ ပရိတျသတျကွီးကလညျး ပိုငျတံခှနျအတှကျဆုတောငျးပေးကွပါအုံးနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးကိုအထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။